Waa maxay Aaladda Suuqgeynta Mobaylka? | Martech Zone
Jimco, Abriil 13, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
eMarketer wuxuu soo jeedinayaa in dadka isticmaala internet-ka kaliya ee mobilka ay ka kordhi doonaan 32.1 milyan ilaa 52.3 milyan inta udhaxeysa 2015 iyo 2021 Sanadkii la soo dhaafay oo keliya, isticmaalka mobilka kaliya ayaa ka kordhay 36.6 milyan oo isticmaale ilaa 40.7 milyan oo isticmaale ah
Suuqgeynta dhijitaalka ah ee caadiga ah ayaa badiyaa la bartilmaameedsadaa oo loogu talagalay isticmaalaha desktop-ka taagan; Natiijo ahaan, waxay leedahay xaddidaadyo kuwa isticmaala moobiilka oo keliya. Hal dhinac oo muhiim ah, dabcan, waa dhaqdhaqaaqooda juqraafiyeed. Taasi waa meesha otomaatiga suuq geynta mobilada (MMA) ayaa soo gasho.
MMA waxaa loogu talagalay inay la shaqeyso dhammaan dhibaatooyinka ka jira teknolojiyadda moobiilka. Isticmaalayaasha moobiilku waxay u dhaqmaan si ka duwan waxayna rabaan waxyaabo ka duwan kuwa isticmaala desktop, MMA-na waxay kaa caawin kartaa inaad ku hagaajiso ololahaaga iyaga. Waxay sameyn kartaa waxyaabo badan oo lamid ah sida otomaatiga suuqgeynta dhaqameed. Waad u adeegsan kartaa inaad ku dhisto oo aad u kala qaybiso liiskaaga xiriirka, aad u abaabusho ololeyaal emayl, aad u sameyso tijaabooyin kala jaban, oo aad ula socoto falanqayntaada. Awooda MMA, si kastaba ha noqotee, waa sida ay uga caawiso shirkadaha inay si gaar ah ugu suuq geeyaan macaamiisha markay ku jiraan aaladooda moobaylka. Amanda DiSilvestro, Salesforce
Istaraatiijiyadda MMA waxaa ku jiri kara jadwalka ogeysiisyada riixista, farriimaha SMS-ka, Isgaarsiinta-Field-ka, Isku-xirnaanta Bluetooth, wifi, iyo farriimaha app-ka lagu daro emaylka moobaylka ah.
Amanda DiSilvestro waxay saadaalisay in otomaatiga suuq geynta mobilada uu caadi ahaan ahaan doono sida otomaatigga suuqgeynta dhaqameed. Waxay ku dhiirrigelineysaa shirkadaha inay tixgeliyaan qaadashada otomaatigga suuqgeynta moobiilka hadda si ay faa'iido weyn uga gaaraan warshadahaaga. Hubso inaad si faahfaahsan u aqriso qodobkeeda MMA oo hubi faahfaahinta soo socota ee ay qaybiyeen Salesforce:
Tags: Amanda DiSilvestroBluetoothgeolocationfarriimaha gudaha ku jirammafariimaha moobilkaxamuulka qaadaemaylka gacantaboostada moobaylkaotomaatiga suuq geynta mobiladasuuqgeynta riixitaanka mobiladafariin riixis mobiledhow isgaarsiinta goobtaNfcfarriimaha riixriix fariiniibiniibka infoforceSMSfariimaha smsfariimaha qoraalka ahwaxamaxaa fiicanwaa maxay otomaatiga suuq geynta mobilada